Ceni: “Tsy ho tratra 20 marsa ny fifidianana depiote” | NewsMada
Ceni: “Tsy ho tratra 20 marsa ny fifidianana depiote”
“74 andro no tsy maintsy fe-potoana ilain’ny Ceni ahazoana mikarakara sy manatanteraka
fifidianana solombavambahoaka. Koa tokony ho ny 20 marsa na farafahelany na ny 27 marsa ny andro hanaovana ny latsa-bato amin’izany.”
Izay ny fanazavan’ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, momba ny fiatrehana ny fifidianana solombavambahoaka, ho tapitra fe-potoam-piasana amin’ny 6 febroary ho avy izao ary tokony hijoro ny Antenimierampirenena vaovao alohan’ny talata voalohany amin’ny volana mey.
Nanatontosa ny adidiny ny Ceni ka efa nandefa ny volavolana tetiandrom-pifidianana eny anivon’ny governemanta, eny Mahazoarivo, ny 16 desambra 2018. Ny antony, voalazan’ny lalàna fa tsy maintsy havoaka ny didim-panjakana miantso ny mpifidy handatsa-bato 90 andro mialoha ny fifidianana solombavambahoaka.
Hisy fahabangana ny andrimpanjakana
Noho izany, araka ny fanazavany, raha nokasaina hotanterahina ny 20 marsa 2019 izay fifidianana solombavambahoaka izay, farafahelany ny 20 desambra 2018 lasa teo no navoaka ny didim-panjakana miantso ny mpifidy handatsa-bato.
Amin’izao fotoana izao, tsy tratra intsony izay fotoana tokony hanatontosana ny fifidianana solombavambahoaka izay. “Ny azo antoka aloha hatreto, tsy maintsy hisy ny fahabangana eo amin’ny andrimpanjakana eo anivon’ny Antenimierampirenena izay”, hoy izy. Tsy ho tratra raha amin’izao zava-misy izao ny fisian’ny Antenimierampirenena hivory amin’ny fivoriana ara-potoana voalohany, ny talata voalohany amin’ny volana mey.
Hijanona fotsiny amin’izay hoe fahabangana eo amin’ny andrimpanjakana izay ve ny fitondrana vaovao fa tsy hitady vahaolana politika?